Iindawo ezigqibeleleyo zokufumana iitemplate zoshicilelo lwe3D | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iindawo ezigqibeleleyo zokufumana iitemplate zoshicilelo lwe3D
Ukuprintwa kwe-3D yintsimi entsha apho iiprojekthi zoyilo-ntathu ziguqulelwa kwilizwe lokwenyani ngoncedo lwabashicileli abakhethekileyo.
Le ntsimi yenkulungwane yama-3 yoyilo iya isiba ngokuya isanda mihla le njengoko iiprinta ze3D ziya zisiba ngokuxhaphaka kubathengi abaninzi, nto leyo ekhokelele ekuvulekeni kweendawo ezininzi ezisebenzisa uluntu ekuhlaleni.
Le ngqokelela iqulethe ezinye ze Ezona Webhusayithi zoVimba zeTemplate eziPhezulu ze3D onokuzisebenzisa ukudibana nabanye abayili, khuphela iitemplate zasimahla, kwaye wabelane ngeeprojekthi zakho zokuyila kwi-intanethi.
I-Pinshape yindawo yentengiso eqhutywa kuluntu ekwi-intanethi yeetemplate ze-3D.
Iwebsite isebenza njenge isixhobo esikhulu seefayile ze-STL zasimahla, kodwa ikwasetyenziswa njengendawo yentengiso yokuthenga nokuthengisa iifayile ze-3D. Uluntu lwasePinshape lwenziwe ngaphezu 70,000 abayili kunye nabenzi abongeza iifayile ze-STL ezintsha kwintengiso yonke imihla.
Iwebhsayithi inabaqulunqi abohlukeneyo kwaye inceda abathengisi baphuhlise iivenkile zabo ngothotho lwezikhokelo.
I-Thingiverse yaziwa njengeyona ndawo yokugcina inkulu yeetemplate ze-3D.
Iwebsite yakhiwe nguMenziBot, inkampani ngasemva kwezinto ezidumileyo Abaprinta be-3D abaphindayo. Indawo inoluntu olukhulu lwabayili be-3D kunye neengcali kwicandelo elinikezela ngeefayile ezintsha ze-STL yonke imihla. Inkqubo ye- Iitemplate zoshicilelo ze3D Ziyahluka ukusuka kwiimilo ezisisiseko ukuya kwizinto ezintsonkothileyo zamaqhekeza.
Umzi mveliso wam weMiny
Umzi mveliso wam weMiny yenye indawo entle kwiitshathi isebenza njengesiseko soovimba beetemplate ezisemgangathweni 3D yoshicilelo.
Iifayile ze-STL yahlulwe yangamacandelo ali-15 Baqala kwimfashini, kubugcisa, kubugcisa nakwizincedisi zasekhaya, kwizixhobo, elektroniki, izinto zokungcebeleka kunye nezinto ezincinci.
Umzi mveliso wam weMiny unikezela ngefayile yokuprinta ye3D esemgangathweni eyilwe ziingcali. Indawo inetoni yeetemplate, kodwa ukuba awuyifumani into oyifunayo, ungasoloko ucela into ethile ngabaqulunqi.
Ukutshintshwa kweNIG 3D Shicilela
Ukutshintshwa kweNIG 3D Shicilela liqonga loluntu ilawulwa yi-STEM. (STEM mfutshane nge «isayensi, itekhnoloji, ubunjineli kunye nemathematics«). Kule webhusayithi, abantu babelana kwaye basasaza uhlobo olukhethekileyo lweetemplate ze-3D ezichanekileyo ngokwesayensi kwaye ziyasebenza kwezonyango.
Ilayibrari yefayile ye-STL ibandakanya i-prosthetics, i-neuroscience, iimodeli zemolekyuli, kunye nokunye.
Indawo yokugcina i3D
Indawo yokugcina i3D yi 3d yeefayile zokuprinta iwebhusayithi ejolise kulwakhiwo, iimodeli zesikali, kunye noyilo lwemveliso nayo yonke into eyenziweyo ngesoftware yeSketchUp.
Le webhusayithi inoluntu olukhulu kwaye ineendlela ezahlukeneyo zokuyila. Ikwajolise nakwabavelisi abafuna ukwabelana, ukumilisela kunye nokukhuthaza iimodeli zabo ze-3D.
ISketchFab sinelayibrari emangalisayo ye Iitemplate zoshicilelo ezibalaseleyo ze3D. Isiza ikakhulu siqulathe uyilo lwabalinganiswa, imifanekiso eqingqiweyo kunye neemodeli ezahlukeneyo kwifomathi ye-STL kunye ne-OBJ.
I-OBJ yifomathi yefayile ethi inikeza ulwazi lombala njengokongeza kwimodeli ye-3D kwaye isetyenziselwa ukuprinta okuqhubela phambili. Enye into eyenza le webhusayithi yahlukile ngumbonisi wemodeli ye-3D yendalo evumela umbono opheleleyo we-360 wento ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi ngaphambi kokukhuphela.
IGrabcad sisiseko esisekwe eluntwini seetemplate ze-3D ijolise ekuncedeni iinjineli zoomatshini ukwakha iimveliso ezinkulu ngokukhawuleza.
Indawo isebenza njengesixhobo sokusebenzisana phakathi kwabaqulunqi kwaye ibanceda ukuba bakhe iimodeli ze3D ngokudibeneyo. Uluntu luneenjini ezingaphezu kwesigidi ezihlaziya ithala leencwadi elivulekileyo yonke imihla ngeefayile zokuprinta zasimahla ze-3D kwi-STL kunye nezinye iifomathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Iindawo ezigqibeleleyo zokufumana iitemplate zoshicilelo lwe3D
Iitemplate ezingama-50 zamahhala ze-InDesign
Uyifumana njani itan nge-GIMP okanye kwi-Photoshop?